Maxaa kasoo baxay kulankii Axmed Madobe iyo taliyaha Itoobiyaanka ah ee Amisom? – Xeernews24
Maxaa kasoo baxay kulankii Axmed Madobe iyo taliyaha Itoobiyaanka ah ee Amisom?
5. August 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan oo goordhow Saxaafada la hadlay ayaa ka warbixiyay shir ay yeesheen Madaxweynaha Jubbaland oo ay weheliyaan xubno ka tirsan golaha fulinta iyo Taliyaha Ciidamada AMISOM Tigabu Yilma oo maanta soo gaadhay Magaalada Kismaayo.
Madaxweyne ku xigeenku wuxuu sheegay in kulanka labada dhinac lagaga hadlay sidii la iskaga kaashan lahaa ammaanka isla markana si midaysan loogu qaadi lahaa howlgalo Cusub oo deegaanada Jubbaland laga samayn doono.
Maxamuud Sayid Aadan waxaa uu Intaas ku daray Madaxweyne ku xigeenku in la isku raacay in si wadajir ah looga hortago wararka been abuurka ah ee lagu kicinayo Bulshada kuwaas oo la xidhiidha Arimaha Doorashooyinka maamulka Jubbaland.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/08/Madoobe.jpg 400 648 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-08-05 19:53:112019-08-05 19:53:11Maxaa kasoo baxay kulankii Axmed Madobe iyo taliyaha Itoobiyaanka ah ee Amisom?
Badhasaab Nuur Sugaal wuxuu yidhi,Kuyuuga Ciisaha Ayaa Gaaban muuse iyo maamasanba... Qaab ay dawlada Fedaraalka si fudud ugu ogaan karto Shabaabka ku dhex jira oo...